Sebtember 9 , 2020
Laga bilaabo Sebtember 22-26, laba kabtan oo MHS ah oo iskutallaabta dalka kawada ayaa la tartamaya asxaabtooda, ardayda ay isku fasalka yihiin iyo xubnaha bulshada si ay u ordaan ama u lugeeyaan inta mayl ee ay kari karaan, dhammaantoodna waxay u ururinayaan lacag gargaarka qaxootiga.
The Arrive Five , oo ah dhacdo la taaban karo oo ay soo qabanqaabiyeen waayeelka Lucca Carlson iyo Austin Hunter, waa dhacdo shan maalmood socotaa iyo tartan masaafada u dhexeeya oo lacag iyo wacyigelin loogu sameeyo qaxootiga. Muddada shanta maalmood ah, kaqeybgalayaasha waxaa lagu casuumi doonaa inay soo galaan melahooda maalinlaha ah si ay ugu qalmaan abaalmarinno, waxayna sidoo kale heli doonaan emayl maalinle ah oo ay ku jiraan sheekooyin qaxooti iyo siyaabo ay uga sii mid ahaadaan.
Lucca had iyo jeer waxay xiiseyneysay abaabulka tartan, kabtanka kabtanka ahna Austin wuxuu raadinayay mashruuc adeeg si uu ugubilaabo qeyb kamid ah musharaxnimadiisa diplomaasiyadeed ee IB. "Tartan sadaqo ah ayaa ahaa gabagabadii dabiiciga ahayd," ayay wadaagtay Lucca. "Waxaa na dhiirrigaliyay Mashruuca Dhaxalka ee diiradda saaraya Class-ka 2020-ka. Waxaan dooneynay inaan xoogaa wacyigalin ah ka bixinno dadka haysta sharciga qaxootinimada isla markaana aan xoogaa lacag uruurinay isla waqtigaas."
Intii ay saadaalinayeen tartan shan-mayl ah markay bilaabeen inay qorsheeyaan dhacdadooda bishii Nofeembar 2019, labada lamaane ayaa ugu dambayntii meesha ka saaray dhacdo shaqsi ahaaneed iyada oo ay ugu wacan tahay xayiraadaha COVID-19.
"Isbadalku daruuri maahan inuu xunyahay, laqabsashaduna waxay noqonkartaa xirfada ugu muhiimsan ee laqabto marka laqorsheynayo dhacdo" ayay tiri Lucca. "Sida iska cad, waligeen ma saadaalin karin masiibo caalami ah, laakiin runtii waxaan ku qanacsanahay in xalka aan la nimid ay wali noo ogolaaneyso inaan fulino labada hadaf ee ah lacag uruurinta iyo wacyi galinta."
Lucca iyo Austin waxaa lagu jiiday fikradda loolan dhowr maalmood ah maxaa yeelay waxay siisaa fursado dheeri ah ka-qaybgalayaasha si ay ula falgalaan macluumaadka iyaga oo adeegsanaya emayllada maalinlaha ah. "Sameynta tartan orod / socod iyadoo diirada la saarayo masaafada isugeyneysa oo aan waqti lagu dhaafin masaafo cayiman ayaa sidoo kale ka dhigeysa munaasabada mid ay qof walba la wadaagi karaan, waxayna ka caawineysaa qabashada baaxada safarada dadka soo barakacay," ayay tiri Lucca. Sida laga soo xigtay Hay'adda Qaramada Midoobay u qaabilsan Qaxootiga, sanad walba dadka barokacay waxay si wadajir ah u safraan in ka badan bilyan mayl meesha ugu dhow ee badbaadada.
Lucca iyo Austin waxay ku barteen casharro muhiim ah hanaanka qorshaynta dhacdooyinka. "Xiriirintu waxay leeyihiin qiime aan la qiyaasi karin. Minnetonka wuxuu leeyahay alumooyin badan oo yaab leh iyo xubno bulshada ka mid ah xitaa haddii aysan waxna ogeyn, waxaa laga yaabaa inay yaqaanaan qof wax garanaya," ayay tiri Lucca. Kaaliyaha mutadawiciinta ah ee Cross Country Pete Miller, oo ah milkiilaha shirkadda Lakes Running Company, ayaa la wadaagay waayo-aragnimadiisa agaasime jinsiyadeed si ay uga caawiso labada qorshe qorshahooda, iyo Minnetonka alum iyo orodyahan xirfadle ah Will Leer ayaa labadaba ku xiray Under Armor deeqaha abaalmarinta. Annalize Johnson oo ah kabtanka xadka iskutallaabta ayaa naqshadeeyay astaanta iyo funaanadda dhacdada.
Si aad wax badan uga ogaato Arriinka Shanta ah oo aad iska diiwaangeliso dhacdada, booqo www.arrivefive.com.